China Led Iju Mmiri China Manufacturers & Suppliers & Factory
Led Iju Mmiri - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Led Iju Mmiri)
100W Mmiri nke Mmiri na-ekpuchi
Ebube Mmiri anyị n'èzí 100W nwere ike mepụta elu 12000lm. Nke a 100w Led Iju Mmiri Bulbs bụ zuru okè nnọchi maka 300W halogen bọlbụ kwekọrọ. Anyị na-eji nnukwu oriọna oriọna dị elu dị ka isi iyi nke ìhè anyị Mpụga Na-enwu Iju Mmiri . Otutu otutu ihe ndi ozo nke di n'azu nke ogbugba mmiri nke ebe ozo bụ ntọt...
60W Mmiri Iju Mmiri nke Azụmahịa 12V
Bbier ọhụrụ design 60W Led Iju Mmiri Ìhè na- enye nnukwu nchapu na dochie 175W Halogen bọlbụ. Mgbagwoju agbagọ & Cross imebi ikpo ọkụ na mma aluminum na-eme ka 12V Led Iju Mmiri na -adịgide adịgide. Okwunigwe a na- ere n'ahịa a bụ IP68 nke e gosiri. Anyị n'èzí mere ka nchebe nchebe enwere ike iji ya rụọ...
640W mere ka ìhè idei mmiri
640W mere ka ìhè idei mmiri Site na SMD 3030 Diana, 640W Light Lights Baseball na -eme ka elu 83200lm dị elu (2000W Ejikọta Ekwesịrị) ma zọpụta 88% na ọkụ eletrik nke ọkụ. Egwuregwu Mkpụrụ Egwuregwu Baseball anyị bụ onyinyo n'enweghị onyinyo ma na-egbukepụ ọkụ, na-enye ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ nke ọma ma na-agbakwunye...
Egwuregwu Mmiri Iju Mmiri na-agba agba 640W
Egwuregwu Mmiri Iju Mmiri na-agba agba 640W Na SMD 3030 LEDs, a 640W ada n'ámá egwuregwu iju mmiri Light mepụta elu 83200lm nke na-egbuke egbuke (2000W Ejiri Ekwenye) ma zọpụta 88% na ọkụ eletrik nke ọkụ gị. Mmiri na-ekpuchi ihu anyị bụ onyinyo-enweghị nnyefe ma na-egbuke egbuke, na-enye ọkụ ọkụ nke ọma ma...
Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Arena 640W
Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Arena 640W Na SMD 3030 LED, nke a n'èzí egwuregwu na-acha ọkụ ọkụ 640W mepụta elu 83200lm nke na-egbuke egbuke (2000W Ejiri Ekwenye) ma zọpụta 88% na ọkụ eletrik nke ọkụ gị. Mmiri na-ekpuchi ihu anyị bụ onyinyo-enweghị nnyefe ma na-egbuke egbuke, na-enye ọkụ ọkụ nke ọma ma...
Super Bright n'èzí ada ámá egwuregwu ìhè 960W
Super Bright n'èzí ada ámá egwuregwu ìhè 960W ✔ 130 LUMENS PER WATT - Nke a elu mmepụta ikanam Stadium ìhè 960W nwere ọnụ nke 124,800lumens. Ebube elu mmiri dị elu 5000K na-egbuke egbuke dị mma maka ịmalite nnukwu ụlọ egwuregwu, ebe ndị egwuregwu na egwuregwu dị ka ụlọ nchịkọta basketball, ụlọ tennis na ebe bọl,...
960W N'èzí Arena LED Iju Mmiri
Super Bright n'èzí ada ámá egwuregwu ìhè 960W ✔ 130 LUMENS PER WATT - Nke a elu mmepụta n'èzí ikanam Stadium ìhè 960W nwere ọnụ nke 124,800lumens. Ebube elu mmiri dị elu 5000K na-egbuke egbuke dị mma maka ịmalite nnukwu ụlọ egwuregwu, ebe ndị egwuregwu na egwuregwu dị ka ụlọ nchịkọta basketball, ụlọ tennis na...
124800lm 5000K 960W Bụrụ Iju Mmiri
124800lm 5000K 960W Bụrụ Iju Mmiri ✔ 130 LUMENS PER WATT - Nke a elu mmepụta n'èzí ikanam Stadium ìhè 960W nwere ọnụ nke 124,800lumens. Ebube elu mmiri dị elu 5000K na-egbuke egbuke dị mma maka ịmalite nnukwu ụlọ egwuregwu, ebe ndị egwuregwu na egwuregwu dị ka ụlọ nchịkọta basketball, ụlọ tennis na ebe bọl, ma ọ...
N'èzí ikanam Stadium Light 960W
N'èzí ikanam Stadium Light 960W ✔ 130 LUMENS PER WATT - Nke a elu mmepụta ikanam Stadium iju mmiri ìhè 960W nwere ọnụ nke 124,800lumens. Ebube elu mmiri dị elu 5000K na-egbuke egbuke dị mma maka ịmalite nnukwu ụlọ egwuregwu, ebe ndị egwuregwu na egwuregwu dị ka ụlọ nchịkọta basketball, ụlọ tennis na ebe bọl, ma ọ...
Led Iju Mmiri Iju Mmiri Oké Iju Mmiri Mmiri Iju Mmiri Egwuregwu Iju Mmiri Iju Mmiri 500w Arena weere Iju Mmiri Ngwurugwu Iju Mmiri